Kutheni umntu evelele kwi-pollen yemithi ethile ngokukhawuleza egula xa edla isaladi yesithelo? Isizathu salokhu si-cross-allergies. Ayibonakali ngokukhawuleza, unokufumana umveliso wonk 'ubomi bakho, kwaye kanye kuphela xa umzimba wakho uya kulahleka kwaye usabele kuwo ngokusabela okukhethekileyo. Isizathu sichazwe kwinto yokuba imveliso yamakhemikhali yezinto ezithile, efana nesakhiwo kwi-allergen, ibonakala ngokukhusela kwethu njengokuba yingozi. Kwaye kwezinye iimeko, i-allergies iyaqhubeka - ye-inshurensi, oko kuthetha.
Ukuguqulwa kwezilwanyana kwi-birch
Ngokuphindaphindiweyo kunabanye, iimpendulo ezivakalayo zixhatshazwa ngabantu abasabela kwi- pollen . Ngaphezu koko, kweli phepha impendulo ayisoloko imele impova yemithi kunye neentyantyambo zeentlobo ezahlukeneyo, kodwa ngokutya. Ngokuyinene - izithelo kunye nemifuno kwifom eluhlaza. Ukuba i-allergen yakho i-alder, i-cross-allergies ingenzeka kwiipulo, iipereyiti, utamatisi, i-kiwi, i-celery. Isethi efanayo semveliso inokubangela ukuphendulwa kulabo abanomdla kwi-birch impova. Nantsi uluhlu olufutshane lwemimiselo eqhelekileyo ye-cross-allergies:
impova yemithi - iipulo, iipereyiti, i-kiwi, i-karoti, i-tomato, ibhanana;
Ukuluma kwezilwanyana - iintlanzi zasemanzini, ngokukodwa imfucu, ubusi, ipolisi;
i-pollen yeentyantyambo kunye nezityalo ezinobuncwane - ubusi, amanqatha, isardard, i-melon, ioli yemifuno;
uthuli, ubanda, izuba, i-cocoa, ivenkile zasemanzini, imifuno kunye neziqhamo zombala obomvu;
ubisi - i-soy kunye nemveliso ye-soy.
Ukuba i-allergen yakho ingqolowa, i-crossergy-allergies ingabonakalisa ukunganyanzeliseki ngothuli lwangaphakathi, okanye imvubelo, kodwa idla ngokuphindaphindiweyo ekuphenduleni kwimithi. Le yinto ebizwa ngokuba yi-cross- allergies kwi-antibiotic - i-mold-containing containing drugs. Kwakhona, abantu abanolu hlobo lobuthakathaka bavame ukuhlakulela ukuxhamla kwimveliso yezonyango kunye neekhemikhali zendlu.
Usulelo lwe-Adenovirus - iimpawu
IHormones ye-correnx ye-adrenal
Kuchaneka njani ukwenza i-enema?
I-cirrhosis yebhiliyari yeprayimari yesibindi
Iziyobisi ezingabonakaliyo kodwa ezisebenzayo
U-Herniated Schmorl we-lumbar spine
Izifo zefungal emqaleni
I-cerebral infarction - iimpawu ezixhalabileyo kunye ncedo lokuqala
Ubungqina beminwe - unyango
Yintoni enokuyithatha umntwana ngomnyaka o-1?
Yintoni ongayidla kwiinyanga ezi-7?
U-Scarlett Johansson wamangalisa abalandeli ngebali malunga nepompo yebele ye-Oscar-2015
Ukugxininisa kwabantwana abaneminyaka emithathu ubudala
I-Kul Sharif uMosque eKazan
Yiyiphi ifilimu ukubukela umfana?
I-Cosmoea, ekhulayo kwimbewu - xa ityala?
Utamatisi ukwenzela i-greenhouse - iintlobo ezintle
I-Thai Ridgeback - inkcazo yohlobo
I-cherry ehle kakhulu
UDemi Moore ukhulile
Ukudlwengulwa kubonakala ngathi?
Isigqoko se-Bologna sonyaka
Indlela yokwenza ikhadi elizenzekelayo?